2013 – Year – Channel Myanmar 6.4
Blood and Ties ( 2013 ) Bluray 720p 5.1 CHအခုရက်ပိုင်းတောင်းဆိုမှုတွေများလွန်းနေတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားနဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်မဟုတ်တာကတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်သာဆုံးဖြတ်ကြပေါ့အဖေတစ်ခု သမီးတစ်ခု ဘဝကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်နေခဲ့တဲ့သားအဖ နှစ်ယောက်ရဲ့ ကံကြမ္မာဟာ" The Devil's Whisper "ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်လေး ထုတ်လွှင့်ပြသပြီးချိန်မှာတော့ဇောက်ထိုးမိုးမျှော်ဖြစ်သွားပါတယ်ဘဝတစ်ခုလုံးမှာဖခင်ဖြစ်သူကလွဲပြီးအခြားဘယ်သူမှ မရှိတဲ့ကောင်မလေးဖြစ်ရပ်မှန် ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းထဲကပြန်ပေးသမားရဲ့ အသံသူ့အဖေရဲ့ အသံနဲ့ဆင်တူနေတဲ့အချိန်မှာတော့အဆိုပါပြန်ပေးဆွဲမှု နဲ့သူ့အဖေရဲ့ နောက်ကြောင်းကို လိုက်လံစုံစမ်းရာမှသူသိလိုက်ရတဲ့အမှန်တရား က ဘာလဲသူ့အဖေကဘယ်လိုလူမျိုးလဲကံကြမ္မာ၊ သူသိထားတဲ့ အမှန်တရား၊လက်တွေ့ဘဝနဲ့သူဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေကထပ်တူကြပါ့မလားဆက်လက်ကြည့်ရှုခံစားပါTranslated & Review By SCRN Encoded By LK
Blood and Ties ( 2013 )
Special ID ( 2013 ) အက်ရှင်ကား ဖိုက်တင်ကား ကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက်မင်းသား Donnie Yenရဲ့ ဇာတ်ကားလေးနဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဟောင်ကောင်မှာတရားမ၀င် မှောင်ခိုဂိုဏ်းတွေသောင်းကျန်းနေတဲ့ကာလမှာရဲတွေက အရေးယူဖို့သက်သေရှာဖွေတဲ့အနေနဲ့ချန်ကျစ်လုံကို သူလျိုအဖြစ်စေလွှတ်ထားခဲ့တယ်..ငယ်ငယ်ကတည်းက ရဲအရာရှိတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ချန်ကျစ်လုံတစ်ယောက် သူလျိုဘ၀မှာဘယ်လိုမျိုးဒုက္ခတွေကြုံတွေ့ရမလဲမှောင်ခိုဂိုဏ်းကရောသူ့ရဲ့ဘ၀အမှန်ကိုသိရှိသွားမှာလားဒါ့အပြင်လူသတ်မှုကြီးတခုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ချန်ကျစ်လုံတစ်ယောက်ဘယ်လိုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာကိုတော့ဆက်လက်ကြည့်ရှုပါဟောင်ကောင်အက်ရှင်ကားတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းအက်ရှင်အပိုင်းကတော့ အထွေအထူးပြောစရာမရှိအောင်ကောင်းပြီးသားမို့ ဆက်လက်ခံစားကြည့်ရှုပါTranslated & Review By Ei Pyae Encoded By LK
Oculus (2013) Occulus (2013)လကျမလှတျသငျ့တဲ့ Horror Movie ထဲမှာOcculus က တဈကားအပါအဝငျ ဖွဈပါတယျ။ကွညျ့ရငျးကွညျ့ရငျးနဲံ့ ကွောကျသထကျကွောကျလာရမယျ့ဇာတျလမျးပါ။ထငျယောငျထငျမှားဖွဈတာလား?သရဲတကယျခွောကျတာလား?ဆိုတာကို ဇာတျလမျးကွညျ့ရငျး အဖွရှောရမယျ့ကားပါ။ကွောကျစိတျဆိုတာ.....ထငျယောငျထငျမှားဖွဈတာကနအေစပွုတာမြားပါတယျ။မှနျထဲမှာရှိတဲ့ ပုံရိပျဟာ ပုံရိပျယောငျပါ။ပုံရိပျယောငျကနေ မှနျကွညျ့နတေဲ့လူကိုပူးကပျလာလမေလားလို့ စိတျကူးယဉျဖူးပါသလား?တကယျကို ပူးကပျလာခဲ့တဲ့အခါဘာတှဆေကျဖွဈလာမှာလဲ?သရဲပူးကပျနတေဲ့မှနျက လူကိုဘယျလိုမြားခွောကျလှနျ့မယျလို့ ထငျပါသလဲ?သရဲပူးကပျနတေဲ့မှနျကိုသိပ်ပံနညျးကနြဲ့ ဖွရှေငျနိုငျမယျလို့ ထငျပါသလား?
Like Father, Like Son (2013) Like Father, Like Son(2013) IMDb.....7.8,,,,Rotten.....87% ဒီဇာတျကားရဲ့အစ(၁၀)မိနဈလောကျမှာ ခငျဗြားတို့ဟာ မိသားစုတဈစုရဲ့ နိစ်စဓူဝ လုပျငနျးစဉျလေးတှကေိုတှလေိ့မျ့မယျ...အဖရေယျ အမရေယျ သားလေးတဈယောကျရယျ.....အိမျထောငျဦးစီးရဲ့ အလုပျအကိုငျနဲ့ မိသားစုအပျေါဦးဆောငျပုံ၊ သားသမီးနဲ့ မိနျးမအပျေါ ဘယျလိုသဘောထားပုံကိုတှရေ့မယျ့အပွငျဇနီးသညျဖွဈသူရဲ့ ပါရမီဖွညျ့ဟနျနဲ့ အသကျ(၆)နှဈအရှယျ သူတို့ထုဆဈနတေဲ့သားလေးရဲ့ လောကကွီးပျေါ လြျောလှမျးဖို့ကွိုးစားပုံတှကေိုပထမ(၁၀)မိနဈလောကျမှာ သိသှားလိမျ့မယျ...တဈနေ့ ဒီသားလေးမှေးတဲ့ ဆေးရုံကနေ လာခဲ့ဖို့ပွောလို့သှားတဲ့အခါမှာ ဆေးရုံက တာဝနျရှိသူတှကေပွောတယျ....လှနျခဲ့တဲ့(၆)နှဈက ကြှနျတျောတို့ဆေးရုံမှာ ခငျဗြားတို့ ကလေးလှဲသှားတယျတဲ့......မိဘ(၂)ဦးအတှကျ တကယျ့ကို အံအားသငျ့စရာဖွဈရပျပါပဲ....အဲ့ဒီအခြိနျမှာ သူတို့ DNA ပွနျစဈတော့ တကယျလညျး လှဲမှားနတေယျ....ဆေးရုံက လူကွီးတှကေ လှဲခဲ့တဲ့ (၂)ဘကျမိဘတှကေိုတှဆေုံ့ပေးတယျ...ဒီနရောမှာ ကွညျ့ရှူနတေဲ့ ခငျဗြားတို့သာဆိုရငျရော ဘယျလိုလုပျမလဲ....ကိုယျ့သားလေးအရငျးဆိုပွီး(၆)နှဈလုံးပွုစုပြိုးထောငျလာခဲ့တာ...ဟော ခုတော့ သားအရငျးမဟုတျတော့ဘူးတဲ့.....ကလေးခငျြးပွနျ လဲမှာလား.....ဒီလိုကပြွနျတော့လညျး (၂)ဘကျမိဘတှကေမလုပျရကျပွနျ....မလဲရငျလညျး ကိုယျ့သားအရငျးမဟုတျတဲ့အပွငျ ကြောငျးမှေးစာရငျးမှာ မိဘရဲ့ DNAက မကိုကျလို့ကြောငျးအပျဖို့ကလညျးအခကျအခဲဖွဈ.....Capernaum(2018) ဇာတျကားထဲမှာတော့ ခငျဗြားတို့အားလုံးဟာဇိမျးရဲ့အဖွဈတဈခုကို လိုကျလံခံစားရတာ...ပွောခငျြတာက ဇိမျးပါဝငျတဲ့Capernaum(2018)လိုကားမြိုးကိုကွိုကျတယျဆိုဒီကားကိုလညျးကွညျ့ကွပါလို့ပွောခငျြတယျ...ဒီကားမှာတော့ မိဘ (၄)ယောကျနဲ့ သားလေး(၂)ယောကျနောကျကိုပါ လိုကျပွီးတှေးရတယျ.....ငါဆိုရငျရော ဘယျလိုလုပျမလဲ....အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျ ...
Montage ( 2013 ) IMDb 7.4 ရထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းအညွှန်းကတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ဖန်တီးရိုက်ကူးထားတဲ့မှုခင်းရုပ်ရှင်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။Uhm Jung-hua , Kim Sang-kyun နဲ့ Song Young-chang တို့ကိုအဆိုပါ Thriller Movie ရဲ့ အဓိကဇာတ်ဆောင် အနေနဲ့ မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။၂၀၁၆ မှာ Montage ရုပ်ရှင်ကားကိုပဲ Hindi မှာ Offciallyပြန်လည်ရိုက်ကူးခဲ့ပါသေးတယ်။ ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ပြန်ပေးဆွဲသမားတစ်ဦးဟာ လွန်ခဲ့သော၁၅နှစ်တည်းက သဲလွန်စတစ်စုံတစ်ရာမကျန်ခဲ့ပဲ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ အမှုရဲ့နောက်ကြောင်းမပြန်ရ ကာလပြည့်ဖို့ ၅ရက်အလိုမှာ တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာ တိတ်တဆိတ် ပန်းပွင့်လေးတစ်ပွင့်ကိုထားသွားခဲ့ပါတယ်။ ရက်ပေါင်းအနည်းငယ်အကြာမှာ တူညီတဲ့ပစ်မျတ်မှာပဲ တူညီတဲ့ ပြန်ပေးဆွဲမှုဟာ တူညီသော နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာ ၄င်းရဲ့ရှေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အမှုကို နောက်ကြောင်းမပြန်ရကာလအတွင်းမရောက်ရှိသေးမီ အလျင်အမြန်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်ကြပါတော့တယ်။စုံထောက် Kim Sang-kyun ဟာ အကြံဉာဏ်ရယူခဲ့ပြီးတော့အဆိုပါအမှုကို တူညီတဲ့ အမှုအဖြစ် အတည်ပြုလိုက်ပါတယ် ။နောင်အခါမှာ အဆိုပါကိစ္စဟာ ကလေးရဲ့ အဘိုးဖြစ်သူSong ...
Montage ( 2013 )
The Fives (2013) ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ IMDB 6.5 ရရှိထားတယ် ကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်အချစ်တော့် Dong-seoka Ma လဲပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ အွန်းအာရဲ့သာယာတဲ့ မိသားစုဘဝလေးဟာ အတွဲလိုက်လူသတ်သမားရဲ့ လက်ချက်ကြောင့် ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ သူမကိုယ်တိုင်လဲ ဒုက္ခိတ ဘဝရောက်ခဲ့ပြီးကံကောင်းလွန်းလွန်းလို့ မသေခဲ့ပါဘူး။ နောက်နှစ်အနည်းငယ်ကြာတော့အွန်းအာ တစ်ယောက် သူ့မိသားစုကိုသတ်သွားတဲ့ လူသတ်သမားရဲ့သဲလွန်စကိုတွေ့မိတဲ့အခါမှာတော့ သူနဲ့အတူ လူသတ်သမားကို ဖမ်းဖို့ လူ၎ယောက်ကိုစုခဲ့ပါတယ်။ အဲ့လူ၎ယောက်ကလဲ သူတို့ချစ်တဲ့သူတွေက ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေ အစားထိုးကုသဖို့လိုအပ်နေသူတွေပါ ဒါကို အွန်းအာက လူသတ်သမားကို ဖမ်းပေးရင် သူသေလဲသေလို့ရပြီဖြစ်တာကြောင့် သူမဆီက အဂါင်္တွေ ပေးလှူမယ်ဆိုပြီး သဘောတူညီချက်ထားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့၅ယောက် လူသတ်သမားကို ဘယ်လိုဖမ်းကြလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကြည့်ရီူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ (ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူကတော့ Waizin ဖြစ်ပီ Arkar Phyo မှ Encoded လုပ်ပေးထားပါတယ်။) File Size : (1.03 GB) & (492MB) Quality : 720 Running Time :2hr 3min Format ...
Trance (2013) ဆိုင်မွန်နယူတန်ဆိုတဲ့သူက ပန်းချီကားတွေ အနုပညာလက်ရာတွေကို လေလံပစ်တဲ့သူအဖြစ် လုပ်ကိုင်ရင်း အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေတဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ် သူတို့လေလံပွဲတွေမှာကလဲ သိတဲ့အတိုင်းလုယက်တာတွေ တိုက်ခိုက်တာတွေ ခိုးယူတာတွေဆိုတာဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါ တစ်နေ့တော့ ဆိုင်မွန်တို့ရဲ့လေလံပွဲမှာ ဂိုရာရဲ့ 'လေထဲကစုန်းမများ'ဆိုတဲ့ပန်းချီကားကိုလေလံဆွဲဖို့ပြင်ဆင်ပါတော့တယ် ဒီတော့ပွဲစပြီးတော့သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ပန်းချီကားကိုလုယူဖို့ ဓာတ်ငွေ့တွေနဲ့တိုက်ခိုက် ရုန်းရင်းဆန်ခတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဆိုင်မွန်ဟာချက်ချင်းပန်းချီကားကိုဖြုတ်သိမ်းပြီး လုံခြုံတဲ့နေရာကိုပို့ဖို့သွားတဲ့အချိန်မှာ လမ်းကနေဖြတ်လုခံလိုက်ရပါတယ် ဆိုင်မွန်ကတားဖို့လုပ်တော့ဆိုင်မွန့်ခေါင်းကိုသေနတ်ဒင်နဲ့ဖြတ်ရိုက်ခံလိုက်ရတယ် ဒါပေမယ့်ပြသနာကအဲ့တာတွေမဟုတ်ပါဘူး ဆိုင်မွန်တစ်ယောက် ကတုံးပေါ်ထိပ်ကွက်ခံရတာပါ ပန်းချီကားကိုအကွက်ကျကျနဲ့ခိုးဖို့လုပ်ထားပြီးကာမှ သူ့ဆီကနေပြန်အခိုးခံလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ် အတိတ်မေ့ချင်သလိုလိုဖြစ်နေတဲ့ဆိုင်မွန်ဟာအိပ်ငွေ့ချနည်းနဲ့ ပန်းချီကားကိုပြန်ရှာဖို့ကြိုးစားရင်ကုထုံးပညာရှင်မမအဲလီဇဘတ်နဲ့တွေ့ပါတော့တယ် သူခိုးရယ် သူခိုးဆီကပြန်ခိုးတဲ့သူခိုးရယ် မိန်းမတစ်ယောက်ရယ် ဖြစ်လာတဲ့ဇာတ်ကြောင်းကမအီသွားပဲတစ်ကားလုံးကို rating6.9အထိခေါ်သွားနိုင်ပါတယ် ဆိုင်မွန်နယူတန်အဖြစ် james mcavoy ကသရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်ဗျ ဒီမှာ ကုထုံးပညာရှင်မမရဲ့ပါးစပ်လေးအဟောင်းသားဖြစ်ရမဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ချို့ပါပါတယ် ညိုချောတွေလှတော့လဲဂလုဂလုရတော့မှာပေါ့ဗျာ (ကျော်မကြည့်နဲ့နော်.ကျော်ကြည့်လိုက်လို့ဇာတ်ကြောကဖီးလ်ကျဲသွားရင် ဒလဘယ်ဆောရီးပဲ) သရုပ်ဆောင်များ -James McAvoy, Vincent Cassel, Rosario Dawson ထွက်ရှိသည့်ခုနှစ် - 2013 ဇာတ်ကားကြာချိန် -101minutes Translated by Aye Chansu Encoded by sithu
The Gifted Hands (2013) ဒီကားလေးကတော့ IMDB 6.6 ရရှိထားတဲ့ Sci-Fi ကားကောင်းလေးတစ်ကားလဲဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စုံထောက်ယန်ဟာ အယောင်ဆောင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ပတ်သတ်မိပြီး အပိုငွေရှာခဲ့မိတဲ့အတွက် အထက်လူကြီးတွေရဲ့ ငြိုငြင်မှုကို ခံနေရတဲ့ရဲတစ်ယောက်ပါ အလုပ်လုပ်တာညံ့ဖျင်းတဲ့အတွက်လည်း အထင်သေးခံနေရပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ ကလေးမိခင်တစ်ယောက်ဟာ သူမကလေးပျောက်ဆုံးနေတဲ့အတွက်တိုင်ကြားဖို့ ရဲစခန်းကို ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်းရဲတွေက ကလေးပျောက်ဆုံးနေတာကို အရေးတယူဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ သုံးပတ်လောက်အကြာမှာတော့ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကလေးငယ်အလောင်းကို လူငယ်တစ်ခုကမမျှော်လင့်ပဲ တွေ့ရှိခဲ့ပါတော့တယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ ပြည်သူတွေကရဲတွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်အပြစ်ပြောဆိုလာပါတော့တယ်။ ကင်ဂျွန်ဆိုတဲ့ ဂရက်ဖက်တီသမားတစ်ယောက်ဟာ အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကို ဂရက်ဖက်တီနဲ့ပုံဖော်ပြီး ပန်းချီဆွဲခဲ့ပါတယ် ဒါကို ယန်ကမမျှော်လင့်ပဲသိရှိသွားပြီး ကင်ဂျွန်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပါတော့တယ်။ စုံစမ်းနေတုန်းမှာပဲ ဒါဟီးလို့ခေါ်တဲ့ ကလေးငယ်တစ်ယောက်ထပ်ပြီးပျောက်ဆုံးသွားပါတော့တယ်။ စုံထောက်ယန်ကရော ဒီအမှုကို ဘယ်လိုဆက်လက်ပြီးစုံစမ်းဖော်ထုတ်မလဲ ကင်ဂျွန်ကရော အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကို ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးရဲတွေထက်အရင် သိနေရတာလဲ တရားခံအစစ်ကရော ယန်ထင်နေတဲ့ ကင်ဂျွန်လား တခြားသူတစ်ယောက်လား? သမီးငယ်လေး ဒါဟီးကိုရော ယန်ကအသက်ရှင်လျက် ပြန်လည်ကယ်တင်နိုင်မလားဆိုတဲ့ ခံစားချက်အစုံအလင်ကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားပါ သဲထိတ်ရင်ဖို ကြိုက်တဲ့ CM fan တွေအနေနဲ့ ကြည့်သင့်တဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ (အညွှန်းနှင့်ဘာသာပြန် သူကတော့ Yuki Aurora ဖြစ်ပီ Arkar Phyo မှ Encoded လုပ်ပေးထားပါတယ်။) (မှတ်ချက် - 720 ဖြစ်တာမို့ small နဲ့မတင်ပေးထားပါဘူး ...
Killer Toon ( 2013 ) Horror ကားတွေ သရဲကားကောင်းကောင်းကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက်ကောင်းကောင်းလေးကြောက်ရအောင် Bluray720p 5.1CH နဲ့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပြီးအသံကွာလတီကောင်းမွန်စွာနဲ့ခံစားကြည့်ရှုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်..နှလုံးရောဂါ ရှိသူများနှင့် ကလေးသူငယ်များမကြည့်သင့်ပါကဲ..အညွှန်းလေးဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်Daum အွန်လိုင်းကာတွန်းရဲ့ အယ်ဒီတာချုပ်ရဲ့ လူသိမခံနိုင်တဲ့ သိသူ ၂ယောက်မရှိနိုင်တဲ့ လျို့ဝှက်ချက်ဟာ ဂန်ဆိုတဲ့ အွန်လိုင်းကာတွန်းရေးဆရာမရဲ့အွန်လိုင်းကာတွန်းစာမူပေါ်ရောက်နေပြီး စာမူထဲကအတိုင်း အယ်ဒီတာချုပ်ဟာဆိုးရွားစွာနဲ့သေဆုံးခဲ့ရတယ်..သိပ္ပံနည်းပညာဖြေရှင်းချက်အရမိမိကိုယ်ကိုယ်သတ်သေမှုလို့ကောက်ချက်ချလို့ရပေမယ့် စုံစမ်းရေးမှူးကလူသတ်မှုလို့ယုံကြည်ပြီးစုံစမ်းခဲ့ရာမှ..ထူးခြားဆန်းကြယ်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ နောက်ကွယ်က အမှန်တရားတချို့ကို ဖေါ်ထုတ်သိလာတဲ့အခါမှာ ......... Translated & Review By Nu MonEncoded By LK
Killer Toon ( 2013 )
The World’s End End 2013 2013 ခုနှစ်ထွက် ဟာသ သိပ္ပံကားတစ်ကား တင်ပေးထားပါတယ်။ Rating 7.0 အထိ ရထားပါတယ်။ ဆိုင်မွန်ပက်တို့ မာတင်ဖရီးမန်းတို့ကိုတော့ ပရိသတ်အတော်များများ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ============သူငယ်ချင်း ၅ ယောက်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၀ က မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ စစ်ဆင်ရေးကြီး တစ်ခုကို ပြန်လုပ်ကြဖို့ ကြံစည်လာကြပါတယ်။အဲဒီ စစ်ဆင်ရေးကတော့ သူတို့မြို့ရဲ့ လမ်းတစ်လျှောက်လုံးက အရက်ဆိုင် အကုန်လုံးက အစကနေ အဆုံးထိ ရောက်အောင်တစ်ညထဲနဲ့ သောက်သွားဖို့ပါပဲ။အရက်ကို ခွေးလိုဝက်လို့ သောက်ဖို့အကြံနဲ့ ဇာတိမြို့ကို ချီတက်လာတဲ့ ဇိုးတစ်သိုက်ဟာ သူတို့မြို့ကို ရောက်ရှိလာချိန်မှာတော့ မထင်မှတ်ထားပဲ လူသားအားလုံးနဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ကယ်တင်ဖို့ ဂြိုလ်သားတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်လာရတဲ့အခါ......ဒီရုပ်ရှင်က အတော်လေးလည်း ရယ်ရပြီး တွေးစရာလေးတွေလည်း ပေးထားမှာမို့ ကိုယ်တိုင်ကြည့်ပြီးမှ တွေးလို့ ပြုံးလိုက် လုပ်နေရမယ့် အမျိုးအစားမျိုးပါပဲ။Dr.Shinobi ဆိုတဲ့ ဘာသာပြန်အသစ်က တင်ဆက်ပေးထားတာပါ။File Size : ...
The World’s End End 2013
Raanjhanaa (2013) Raanjhanaa (2013)( အချစ်ဆုံး မင်းတစ်ယောက်သာ) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••( Drama စစ်စစ် မှ သိပ်ကြိုက်တဲ့ သူတွေအတွက်တော့ အညွှန်း မလိုပါဘူး။ )အဖြောင့်အတန်း မရှိလှတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေကြား မွန်းကြပ်နေတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ ပုံပြင်လေးပေါ့ဗျာ။ဒီဇာတ်လမ်းကို ကြားပြီးရင် မင်း ဟာ တစ်ခုခု ကို ခံစားဆုပ်ကိုင်လာမိမယ်။ ဆို့နင့်နင့် နဲ့ ဘ၀ တစ်ခုကို လက်ဝယ် ရချင်ရလာလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ ကံ ကြမ္မာတစ်ခုရဲ့ စုတ်ချက်သီခြယ်ခြင်းတွေပါပဲ။Zoya ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးကို တစ်ဖက်သတ် ချစ်မိခဲ့တဲ့ ကောင်လေး Kundan ……… ပါးအချက်ပေါင်း 15 ချက်ရိုက်ခံပြီးမှ နာမည်လေးတစ်ခုကို မြတ်မြတ်နိူးနိုး သိခွင့်ရခဲ့တယ်။ဒါပေမယ့် အကြိမ်ကြိမ် လွဲချော်နေတတ်တဲ့ ကံစီရင်ချက်က 16 ခါမြောက် ပါးတစ်ချက်ကို ထပ်မံ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်။ ဒါဟာ လူမျိုးဘာသာ ကွဲပြားမှုကြောင့် Zoya လက်ဖ၀ါးနုနု နဲ့ ရိုက်ခဲ့တဲ့ ...